Kuala Lumpur, Nge-6 ka-Epreli (AFP) - nge-12 nge-12 namhlanje, i-coronavirus yenqaku laseMalaysia yaqinisekisa amatyala ayi-131 kunye nokusweleka kwabantu abangama-62, oko kusizisa inani elipheleleyo lamatyala aqinisekisiweyo ku-3,793. Namhlanje, bangama-236 abantu abagxothiweyo esibhedlele, nto leyo ezise inani elipheleleyo lamatyala abuyiselweyo kwi-1,241.
Ukongeza, ngokutsho kweleta kaMphathiswa wezothutho u-wei jiaxiang, iMalawi yathunyelwa evela e-China iibhedi ezili-100 ezifanelekileyo kwizibonelelo zononophelo zaze zangeniswa emabhegini. Iqela lokuqala leebhedi ezingama-28 lifikile eMalawi ngosuku olungaphambi izolo kwaye lathunyelwa kwizibhedlele ezininzi zikarhulumente izolo .
Unombulelo kwisiseko seoyile yelizwe lonke ngokunikela ngesisa kweebhedi ezili-100 kwicandelo lezonyango elinikezela ngenkonzo yezempilo kunyango lwezigulana zekoronavirus.
Iibhedi ziyalelwa ngokukodwa ukusuka kwi-hebei pukang izixhobo zonyango co., Umenzi omkhulu wezixhobo zonyango e-hebei, China.Ngokunjalo, amazwe amaninzi kwihlabathi jikelele, kubandakanya i-Italiya, iSpain, i-United Kingdom kunye ne-United States, ayalela iibhedi ukusuka e-China ukuze. Sebenzisa kwiindawo zononophelo.
Ngokutsho komphathiswa wezothutho waseMalawi u-wei jiaxiang, "akukho lula ukwazisa ezi bhedi, nganye inobunzima obufikelela kuma-250kg, kwilizwe lethu. Ubuphathiswa bezothutho kufuneka bucwangcise iiplani ezintathu zokuzisa iibhedi kwilizwe lethu.
Oko ulawulo lwenqwelo moya lwase China (CAAC) luyelele abantu bangaphandle ukuba bangene eChina ukusukela nge-28 ka-Matshi, inkonzo yezothutho kufuneka ifake isicelo kwi-CAAC ukuvumela iinqwelomoya ngenqwelo moya ukuya eTianjin naseBeijing, zithwala iibhedi ezilikhulu ezibhedlele ziye ekhaya.
Ngenxa yobukhulu obukhulu beebhedi, iibhedi ezingama-28 kuphela zizalisa wonke umthamo wenqwelomoya.
Inkonzo ikwathethathethwano olululo kunye nolawulo lokuhamba ngenqwelomoya e-China ukuzisa iibhedi ezingama-72 esele ekhaya ngokukhawuleza.
Ezi bhedi ziya kunceda ekusindiseni ubomi bezigulana ezininzi. Ndiyanibulela kwisiseko seoyile yesizwe, kwimpahla yomoya, kummeli waseTshayina eMalaysia nakwinkonzo yethu yezangaphandle ukuba ancedise ekuqinisekiseni ukuba ezi mabhedi zisuka eTshayina ziye eChina. ”
Ukongeza, inkonzo yezempilo yaseMalaysia ingeniswe kwilizwe laseMalawi i-94 yanyanzela abaguquli abahamba ngenqwelomoya ngenqwelo moya ukusuka e-Shanghai ukuya Kuala Lumpur kwisikhululo seenqwelomoya samazwe aphelileyo izolo.Ezi zixhobo zonyango ziya kuba luncedo kakhulu kwiqela lezonyango eMalawi ukusindisa ubomi obuxabisekileyo.